Eyona Dili yoSuku lweNkulumbuso yeAmazon ngowama-2021 kunye nendlela ethengisa ngayo 'uMbane' - Indlela Yokuphila
Eyona Indlela Yokuphila Yonke into ekufuneka uyazi malunga ne-Amazon Prime Day 2021
Yonke into ekufuneka uyazi malunga ne-Amazon Prime Day 2021
Ikomkhulu lengingqi yeAmazon eSunnyvale, eCalifornia.Ukuqokelelwa kukaSmith / uGado / imifanekiso kaFetty
I-Prime Prime yeAmazon, eneneni, yiKrisimesi yakuqala yeAmazon Izigidi ezingama-200 zababhalisi beNkulumbuso. Ngeli xesha lokuthengisa, amalungu eNkulumbuso aya kuba nakho ukufikelela kumaxabiso aphantsi enyakeni kwiimveliso zeAmazon kunye nezinye ezivela kwezinye iimveliso eziphambili. Nokuba ezinye zezona zinto ziphambili, iimveliso zethikithi enkulu zibandakanyiwe, kunye nokuphumelela kokujongana nezinto ezinje ngamacwecwe oMlilo, kunye neenkonzo ezinje ngeAmazon Music Unlimited. Akukho candelo kule ndawo lishiyekileyo; intengiso igubungela iimveliso kuwo onke amacandelo, kubandakanya itekhnoloji, ikhaya, ifashoni, kunye nokunye. Izinto zasekhaya zaziwa ngokubanzi ngoMhla wokugqibela weAmazon, kunye nezinye zezona zinto zithengiswayo Iimbiza zangoko kunye nokungasebenzisi ngcingo, iirobhothi .
I-Amazon Prime Day yaqala ukwaziswa ngo-2015, ngokuyinxalenye ukubhiyozela iminyaka engama-20 yesiza. Eyona njongo iphambili yayikukudala esona siganeko sikhulu sentengiso sonyaka, ngokunokwenzeka sibetha uLwesihlanu omnyama.
Kufanelekile ukuba uqaphele ukuba inkampani ibone isiphithiphithi esijikeleze umsitho. Kwi-2019, abasebenzi kwiindawo zokugcina iimpahla zaseAmazon bacwangcisa ukuhamba ngexesha lokuthengisa ngoJulayi. Indawo yokugcina izinto engazinzanga kwindawo yokusebenza, kunye nomthwalo onzima wokufuna umsebenzi, bezisoloko ziphononongwa iminyaka emininzi.
Unini uSuku lweNkulumbuso yaseAmazon?
Eli gama liyalahlekisa kancinci- Usuku lweNkulumbuso yaseAmazon okunene luhlala iintsuku ezimbini. Ukuqala ezinzulwini zobusuku (PDT) ngoMvulo, nge-21 kaJuni, ababhalisi beNkulumbuso baya kuba nakho ukufikelela kwezi zivumelwano zodwa. Umsitho uyasongwa kusuku olulandelayo emva kweeyure ezingama-48 (ukuphela kosuku ngoJuni 22), nangona kunjalo kulindeleke ukuba kubekho izivumelwano eziya kuthatha iintsuku ezimbalwa emva koko.
Kwiminyaka edlulileyo, i-Amazon Prime Day yabanjwa ngoJulayi. Kunyaka ophelileyo, ukuthengisa kuguqulwe kamva enyakeni kuye ku-Okthobha, ngenxa yesifo. Ngenxa yokuhlonipha abo bashiye imisebenzi yabo, kunye nokuvuma ukungazinzi kwezentlalo nezoqoqosho okubangelwa yi-COVID-19, iAmazon ithathe isigqibo sokulibazisa ukuthengiswa kweentsuku ezimbini. Isigqibo salo nyaka sokubamba intengiso ngoJuni sishiya abathengi bezibuza ukuba ingaba le nyanga izakuba yinto entsha na kulo msitho.
Zithini izithembiso zombane?
Ayisiyo kuphela indawo enikezela ngeentengiselwano ezibonakalayo ngexesha lonke leyure ezingama-48, kodwa ukuba ukhawuleza ngokwaneleyo, unokubona ukuKhanya ngokuKhanya. IziXhobo zombane ziintengiso ze-pop-up ezifumanekayo ngexesha elinomda kakhulu-zihlala kuphela iiyure ezimbini ukuya kwezintandathu manqaphanqapha kwi-Amazon Prime Day.
Ixabisa malini ubulungu beNkulumbuso?
Ubulungu obunguNdlunkulu buxabisa abasebenzisi i-13 / ngenyanga, okanye i-119 yeedola / ngonyaka. Ukongeza ukufikelela kwi-Prime Day yeAmazon, ababhalisi beNkulumbuso bayazonwabela ezinye izibonelelo, ezinje ngokuhambisa iintsuku ezimbini kwizinto ezininzi, imivuzo kwiindawo zeAmazon (ezinje ngokutya okupheleleyo) kunye noluhlu lweemovie kunye nemidlalo yeTV efikelelekayo ukusasaza iAmazon Prime Video . Ukuba ulumkele ukuhlawulela iNkulumbuso, abasebenzisi banokufikelela kwiintsuku ezingama-30 zesilingo sasimahla.
Zeziphi ezona ntengiso zibalaseleyo zoSuku lweAmazon kulo nyaka?
Ukubona njengoko iAmazon ithengisa, kulungile, intle kakhulu yonke into, kulula ukoyiswa ngamathuba anikezelwa yiAmazon Prime Day. Umbonisi uqokelele uluhlu lwezinye zezona ntengiso zibalulekileyo kwiindidi ezahlukeneyo ukuze ngethemba ukwenza ukuthengwa kwakho kungoyiki kangako.
I-Apple AirPods Pro - Ezi AirPods zikhangeleka kwaye zivakala ngcono kunangaphambili, kwaye zeza nokucinywa kwengxolo. Gcina iipesenti ezingama-21.
Umboniso we-Echo 5 - I-Echo Show 5 ikuvumela ukuba wenze iifowuni zevidiyo, usasaze umdlalo, kunye nokunye. Nangona le ayisiyiyo eyona nto ikhutshiweyo yakutshanje, sesona sesona siphantsi kwiAmazon Prime Day kulo nyaka. Gcina iipesenti ezingama-44.
Iplagi efanelekileyo yeAmazon - Le ndawo ikhutshiweyo, xa ixhunyiwe kwezinye iindawo ezikhoyo ekhayeni lakho, zinokulawulwa zisebenzisa i-Alexa app kwifowuni okanye ithebhulethi yakho, okanye ngesixhobo se-Echo. Gcina ama-40%.
IBravava Jet M6 - Le robhothi iya kucoca ikhaya lakho, ngoncedo lwe-iRobot App. Gcina ama-22%.
Uhlobo lwesine lwe-Echo - Sebenzisa esi sixhobo ukusasaza iihits zakho ozithandayo, ukubonelela ngezikhumbuzo, kunye nokulawula ezinye izixhobo ekhayeni lakho. Gcina ama-25%.
I-TOZO W1 itshaja engenazingcingo - Kulabo bazithiyileyo iintambo, le pad yokutshaja ngaphandle kwamacingo iza ngemibala eyahlukeneyo. Gcina ama-42%.
BOSE ingxolo yokucima ii-headphone - Imodeli ye-700 iza nezinto ezininzi ezongezelelweyo, ezinje ngamanqanaba ali-11 okurhoxiswa kwengxolo, kunye ne-Alexa kunye neGoogle Assistant. Gcina i-18%.
I-Insignia HD Smart-TV - I-Smart TV encinci, encinci. Gcina 41%.
Ukudlala kunye nokusasaza
I-Nintendo Tshintshela iWitcher 3: Ukuzingela endle - I-Witcher 3: Ukuzingela endle kuye kwaba yeyona RPG idumileyo kwimbali. Gcina ama-40%.
IAmazon Music Unlimited - Le nkonzo yokwabelana ngomculo ivumela ukufikelela kwiingoma ezingaphezulu kwezigidi ezingama-70 kunye neepodcast, ngaphandle kwentengiso. Amalungu aphambili angekazami le nkonzo anokuyifumana simahla iinyanga ezine.
IPrimiyamu eVakalayo -Ababhalisi beNkulumbuso banokufikelela koku nge-54% isaphulelo seenyanga ezine. Ibhonasi eyongezelelweyo: incwadi yeaudio yokukhetha inyanga nenyanga.
Inqaku likaNintendo leZelda: Ukuphefumla kwendalo - Nangona esi sihloko sakhutshwa kwiNintendo Shintsha ngo-2017, sihlala sesinye seyona midlalo ilungileyo yokuTshintsha kwintengiso. Gcina iipesenti ezingama-30.
Izinto ezifunekayo ehlotyeni
Ukuya kuthi ga kwi-35% isaphulelo sikhethiwe I-Aveeno iiskrini
Ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-27 ukhethe ukukhetha Izithsaba zelanga zeCoppertone
Ukuya kuthi ga kwi-31% isaphulelo sikhethiwe IHawaiian Tropic ii-sunscreens
Ukuya kuthi ga kwi-20% isaphulelo sikhethiwe Ukucoca iinyosi zeBurt
Ukuya kuthi ga kwi-33% isaphulelo sikhethiwe I-Neutrogena yokucoca kunye nokusula
Ukuya kuthi ga kwi-22% isaphulelo sikhethiwe Abahlambululi bezobuhle abathembekileyo
UMarisa Tomei uthengisa ngeLali yakhe yaseGreenwich ethandekayo emva kweminyaka engama-24
Iifayile ezili-10 zeDijithali eziFileyo Uthandana noMdlali
UPhononongo loMthombo wePsychic: Ungalufumana njani olona Lwazi luLungileyo lokuFunda
'URay Donovan' Redux: Phinda ubuye 2 × 5: 'Intwasahlobo yaseIreland'
USimon kunye noGarfunkel Bernie Sanders
kuthi izixeko ezinengxaki zamanzi
Ixesha le-ray donovan iziqendu ze-3
omnye wabadlali abanengcwangu
yenze malini yodwa
UJack kirby kunye no-stan lee